Madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya oo ka hadlay weerarkii Muqdisho. – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya oo ka hadlay weerarkii Muqdisho.
Star FM March 1, 2019
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si kulul uga hadlay weerarkii qaraxa ku bilaawday ee xalay ka dhacay Magalada Muqdisho ilaa saakana Soo gaadhay.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in weerarkaasi ay aad uga xun yihiin,isla markaana ay u tacsiyadeynayaan dadkii ku dhintay,waxaana uu sheegay inay xanuunka la qeyb sanayaan qoysaska ay dhibaatadu Gaadhay.
Laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayuu ugu baaqay inay xoojiyaan mas’uuliyadda ka saaran badbaadinta shacabka, sidoo kalena shacabka ayuu u soo jeediyay inay hay’adaha amniga kala shaqeeyaan sugida ammaanka.
Sidoo kale Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa isna dhankiisa sheegay inuu xanuunka la qeybsanayo dadka Soomaaliyeed ee ku geeriyooday weerarkaasi iyo kuwa ku dhaamacmay intaba.
Weerarka xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ilaa saakana la soo sheegayo inaan la soo afjarin Marka laga soo tago hadalka Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya wali kamaysan hadlin dowladda Federaalka Soomaaliya waxaana wararku sheegayaan in weerarkaas ay ku dhinteen ugu Yaraan 15 qof.
← Maraykanka oo hal milyan oo doolar u ballanqaaday ciddii soo gudbisa xogta wiilka Osama Bin Ladin
Madaxda ismaamulada xoola dhaqatada oo uu shir uga furmayo Garissa →